Wikipedia talk:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (အထွေထွေ) - ဝီကီပီးဒီးယား
Wikipedia talk:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (အထွေထွေ)
Help Desk လေး အထွေထွေ ကဏ္ဍမှာ ထပ်ထည့်ရင်ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်နော်။--Chitpone ၀၄:၀၀၊ ၇ ဇန်​န​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၁ (UTC)
၁ Error Reporting
၂ To Standardize on Term, Name on Thai related history
၃ Reusing Wikipedia Content
I am new user to my.wikipedia.org. I have to report error. I think these two persons are not the same. Please check the photo. http://my.wikipedia.org/wiki/ကျော်ဝင်း၊ မနုဿ (စာရေးဆရာ) http://my.wikipedia.org/wiki/ကျော်ဝင်း
--Greenhornnovice ၀၅:၃၅၊ ၁၄ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၁ (UTC)
Thanks for reporting the error. We use the wrong photo I think. Zawthet ၀၅:၄၆၊ ၁၄ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၁၁ (UTC)
To Standardize on Term, Name on Thai related history[ပြင်ဆင်ရန်]
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် ကနေ့မှ စပြီး Register လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဇော်သက် ခေါ်နေတာ ကြာပါပြီ။ မအားတာနဲ့ မဝင်ဖြစ်တာပါ။ အခုလဲ မအားပါ...။ သို့သော် ဝင်ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်လိုပဲ မအားတဲ့သူတွေကလည်း ရတတ်သလောက် အချိန်လေးက ဖဲ့ပြီး လုပ်နေတာ မြင်တော့ တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီချင်လို့ ရီဂျစ်စတာ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အခုမှ စမ်းပြီး တည်းဖြတ်တာတွေ လုပ်ကြည့်မှာပါ။ ဆိုတော့ ကိုယ်နည်းနည်းပါးပါး သိထားတဲ့ ထိုင်းတွေ အကြောင်းဖက်ကို ဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီမှာ တည်းဖြတ်မလို့ လုပ်နေရင်းနဲ့ လိုအပ်ချက်လေးကို တွေ့သွားတယ်။ ထိုင်းနာမည် အခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့။ သူတို့ကို Standard ထားဖို့ လိုနေပြီ ထင်တယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော် စမ်း ဘာသာပြန်ထားတဲ့ သောက္ကတဲ မှာဆို ခေါင်းစဉ်က သောက္ကတဲပဲ။ ဒါပေမယ့် အောက် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ဆူကိုထိုင်းဆိုပြီး ပြန်ထားတာ ရှိတယ်။ သောက္ကတဲနဲ့လည်း ရေးထားတာပဲ။ သောက္ကတဲက ဆူကိုထိုင်းကို ရှေးမြန်မာတွေ အရင်က ခေါ်ကြတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပါ။
Ram KhamHaen ကိုလည်း တိုက်ရိုက် အသံထွက် (ရမ်းခမ်းဟဲန်) ယူမှာလား မြန်မာလို မွေးစားအသံထွက် (ရာမခမ်းဟိန်) ကို ယူမလား မသိ။ အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။ ကိုယ့်အချိန်ကို စိုက်ပြီး လုပ်ပေးတာ...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် တည်းဖြတ်ပေးပါ့မယ်။
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုဘွိုင်းစ်... Bangkok ကို တချို့က ဗန်ကောက်လို့ရေးပြီး အများကတော့ ဘန်ကောက်လို့ရေးပါတယ်... ကျနော်ကတော့ ဘန်ကောက်လို့ရေးတာကိုပိုသဘောကျမိတယ်.... ပိုပြီးတော့လည်း အသုံးအစွဲများတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ကျွန်တော့် ရဲ့ စိတ်ကူးအရကတော့ ဘ=b, ဗ=V, ရ= R, ယ=Y, လို့ သဘောထားပြီး ရေးပါတယ်ခင်ဗျ။ Standard အရဆိုရင် ကျောင်းမှာ သင်ဖူးတဲ့ စကားလုံးကတော့ အကောင်းဆုံးပါခင်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ အလိုအလျောက်ရှိပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ --၏Battoe19 (talk) ၀၂:၅၃၊ ၂၄ မေ​ ၂၀၁၃ (UTC)
Hi Ko ba Toe, I'll try to put both (burmese known name and actual spell name) so people might not get confuse with it. Thanks,
Reusing Wikipedia Content[ပြင်ဆင်ရန်]
hi, everyone, I would like to know about Reusing Wikipedia Content. How can I contact? Please,thanks -- Kyawin Naing
Please see Wikipedia:Reusing Wikipedia content. Ninja✮Strikers «☎» ၀၆:၅၇၊ ၂ မေ ၂၀၁၆ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_talk:လက်ဖက်ရည်ဆိုင်_(အထွေထွေ)&oldid=349586" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇၊ ၀၉:၅၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။